३.६९ % बढ्यो नेप्से परिसूचक, जलविद्युत् कम्पनीको शेयरप्रति लगानीकर्ताको बढी आकर्षण
२०७८ बैशाख, १४
वैशाख १४, काठमाडौं । यो साता दुई कारोबार दिन लगातार उच्च अंकले घटेको बजार तेस्रो दिन मंगलवार भने ३ दशमलव ६९ प्रतिशत बढेको छ ।
यसदिन ९२ दशमलव ४६ अंक बढेर नेप्से परिसूचक २ हजार ५९९ दशमलव शून्य ७ विन्दुमा पुगेको छ । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतवार ७५ दशमलव ७९ अंक र सोमवार ६५ दशमलव ५८ अंक बजार घटेको हो ।
सोमवार २ हजार ५०६ दशमलव ६१ विन्दुमा बन्द भएको बजार मंगलवार २ हजार ५०६ दशमलव ५२ विन्दुदेखि खुलेको हो । उता, सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि मंगलवार ३ दशमलव २० प्रतिशत बढेको छ । १४ दशमलव ४८ अंक बढेर सेन्सेटिभ इन्डेक्स ४६७ दशमलव २८ विन्दुमा पुगेको हो ।
मंगलवार नेप्से परिसूचकमा उच्च वृद्धि भएपनि कारोबार रकम भने सोमवारको भन्दा कम भएको छ । सोमवार रू. ६ अर्ब ५९ करोड ९ लाख २८ हजार बराबरको १ करोड २९ लाख ११ हजार ७२१ कित्ता शेयर कारोबार भएकामा मंगलवार रू. ५ अर्ब १० करोड ९० लाख ९६ हजार बराबरको १ करोड २ लाख २ हजार २१९ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । यो कारोबार २१६ ओटा कम्पनीको ६३ हजार ५५८ पटकको व्यापारमा भएको हो ।
मंगलवार सबैभन्दा बढी अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर कारोबार भएको छ भने शेयरमूल्य पनि यसै कम्पनीको सबैभन्दा बढी बृद्धि भएको छ । अपर तामाकोशी हइड्रोपावरको यसदिन रू. २३ करोड ८२ लाख ६७ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो ।
यसदिन कम्पनीको शेयरमूल्य भने १० प्रतिशत अर्थात् प्रतिकित्ता रू. ७७ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ८४७ कायम भएको हो ।
अपर तामाकोशीसँगै यो दिन विशाल बजार कम्पनी , महिला लघुवित्त, युनाइटेड इन्स्योरेन्स, समीट लघुवित्त वित्तीय संस्था, मल्टिपर्पस फिनान्स , ग्लोबल आइएमई लघुवित्त, अरुणभ्याली हाइड्रोपावर, छ्याङ्दी हाइड्रोपावर, उन्नति सहकार्य लघुवित्त र युनाइटेड ईदी मर्दी आरबिबि हाइड्रोपावरको शेयरमूल् ९ प्रतिशतभन्दा बढीले बृद्धि भएको छ ।
यो दिन जलविद्युत् समूहका लगानीकर्ताहरुले सर्वाधिक कमाएका छन् । कारोबारमा आएका सबै समूहगत परिसूचक बढ्दा जलविद्युत् समूहको परिसूचक सर्वाधिक ६ दशमलव ४८ प्रतिशत बढेको हो ।
त्यस्तै यसदिन बैंकिङ्गको २ दशमलव ६ प्रतिशत, व्यापारिकको ५ दशमलव ५५ प्रतिशत, होटल्स तथा पर्यटनको १ दशमलव १९ प्रतिशत, विकास बैंकको ३ दशमलव ४४ प्रतिशत, वित्तको २ दशमलव ९१ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको ४ दशमलव ४ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको ४ दशमलव ४९ प्रतिशत, अन्यको ३ दशमलव ६५ प्रतिशत, लघुवित्तको ४ दशमलव ७७ प्रतिशत, जीवन बीमाको ३ दशमलव ४१ प्रतिशत, म्युचुअल फण्डको १ दशमलव ३४ प्रतिशत र लगानी समूहको ४ दशमलव ६५ प्रतिशत परिसूचक बढेको हो ।
तीन ओटा कम्पनीले ऋणपत्र निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डसँग मागे अनुमति[२०७८ बैशाख, २८]
प्रभु बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ऋणपत्र निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डबाट पायो अनुमति[२०७८ बैशाख, २८]
२६७३.३१ विन्दुमा पुग्यो नेप्से, करीब ६ अर्बको कारोबारमा नेपाल पुनर्बीमाको सर्वाधिक हिस्सा [२०७८ बैशाख, २८]
तेस्रो त्रैमासमा बोटलर्स नेपालका दुबै कम्पनीको नाफामा वृद्धि[२०७८ बैशाख, २८]
अबको सरकारले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड[२०७८ बैशाख, २८]
३ अर्ब ८३ करोडको कारोबार भएको बजारमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सर्वाधिक हिस्सा (२ बजेको अपडेट)[२०७८ बैशाख, २८]
१.७ % ले बढेको बजारमा बोटलर्स नेपाल तराईको शेयरमूल्य सर्वाधिक वृद्धि (१ बजेको अपडेट)[२०७८ बैशाख, २८]
बोटलर्स नेपाल तराईको शेयर मूल्य १० % ले वृद्धि[२०७८ बैशाख, २८]
०.३५ % ले बढेर २६५५.०५ विन्दुमा नेप्से परिसूचक (१२ बजेको अपडेट)[२०७८ बैशाख, २८]
मलेशियाको वन एमडीबीले हाल्यो दोयचे, जेपीमोर्गन र काउट्समाथि मुद्दा
२६७३.३१ विन्दुमा पुग्यो नेप्से, करीब ६ अर्बको कारोबारमा नेपाल पुनर्बीमाको सर्वाधिक हिस्सा